ị bụ ebe a: Home Hair Care
Na-akpata ntutu ọrịa
Trichology a na-akpọ otu n'ime ọtụtụ ọgwụ na ahụ ike isiokwu, iji na nchoputa, ọgwụgwọ, nakwa dị ka mgbochi nke ọrịa na-amụ ntutu na ahịa ala isi. Na-akpata ntutu ọrịa na ogbenye ọnọdụ nke ntutu, nwekwara, ka aji akpụkpọ, nwere ike ime ka a dịgasị iche iche nke ihe, otu nke ga-kwuru: ọrịa nke esịtidem akụkụ na ala ọgụ; mmiri ọgwụ ọrịa na-adịghị ala ala … Continue reading Na-akpata ntutu ọrịa →
More: Na-akpata ntutu ọrịa
Ogologo ntutu isi - bụ ezigbo mma nke ọ bụla fashionista, na ihe ya na mpako. Ma, otu naanị ọnụnọ nke ogologo ntutu isi ezughị: ha kwesịrị inye olu na udi, mesie ha uru mara mma ma dị mma n'anya ịkpụ ntutu gị ihu udi. Ọ bụrụ na ndị edozi isi bụ họọrọ n'ụzọ ziri ezi dị ka ụdị nke ntutu isi gị, Ị pụrụ ijide n'aka na, na ị adọta uche na anya.
More: Ịkpụ ntutu nwanyi "okpu"
N'ihi na ihe ọ bụla nwaanyị oke nke a ọhụrụ edozi isi fọrọ nke nta mgbe – isi mgbu na chọrọ ime nnwale, na Chineke ji machibido, ọ ga-ada.
More: Ụmụ nwanyị ịkpụ ntutu – otú ịhọrọ?
Nwanyị ọ bụla maara, dị ka ọ bụ mgbe ụfọdụ ike ịhọrọ ọ bụla ịkpụ ntutu. Woman chọrọ maa mesie ihu, show ntutu, na ya mara mma ma na-ụfọdụ na-akpali image.
More: Ụmụ nwanyị ịkpụ ntutu cascade
African braids nwetara ihe na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto. Mgbe niile, ọ bụ nnọọ mara mma, fashionable na nkecha. Ọtụtụ anya na ụmụ okorobịa ma ọ bụ ụmụ agbọghọ na ntutu na-echekarị: "Ọ bụ na-akpali, na otú ikpa African braids?»
More: Olee otú ikpa African braids?
page 1 si 6
Ịtọ na obere ntutu